KUKLONYELISWE ABAFUNDI ABAPHASE NGAMALENGISO KU-MATRIC ENQUTHU - Ilanga News
Home Izindaba KUKLONYELISWE ABAFUNDI ABAPHASE NGAMALENGISO KU-MATRIC ENQUTHU
KUKLONYELISWE ABAFUNDI ABAPHASE NGAMALENGISO KU-MATRIC ENQUTHU
UMFUNDI waseMaceba Secondary School, obaqwaqwade bonke ngokuphasa kahle ezikoleni zaseNquthu, uMnelisi Sibisi, ubehalaliselwa imeya yaseNquthu, uMnu Zama Shabalala, inkosi yesizwe uMnu Fisukwazi Hlatshwayo, isekela lemeya uMengiwe Ngobese.
BASATHWELE kanzima abafundi besizwe sabeSotho, eNquthu njengoba kusadingeka bafudukele eGauteng naseFree State ukuze bathole izikole ezifundisa ngolwimi lwabo. Lokhu kuvele ngoLwesibili emcimbini kaMasipala waseNquthu, wokuklonyeliswa kwabafundi bezikole zaseNquthu abenze kahle kumatikulestheni emcimbini obuseMpumelelweni, khona eNquthu nowenziwa umasipala wakhona. Omunye wabafundi uTebogo Motloung, utshele abezindaba ukuthi basathwele kanzima ngoba basancishwa ulimi lwabo yize bebaningi eNquthu. INquthu inesizwe esikhulu sabeSotho esiholwa yinkosi yakwaMolefe kanti kunezikhalo zokuthi ngisho ezikoleni zakhona kusafundiswa isiZulu njengolimi lwebele. Lesi sizwe sinezikole ezimbili kuphela zamabanga aphakeme, okuyiIkaheng High School neLeneha Tumisi Secondary.
UTebogo obefunda eLeneha, uthe kumjabulisile ukuthi ekugcineni bazithole behlonishwa ngolimi lwabo njengoba iMeya yaseNquthu, uMnu Zama Shabalala, imhloniphe ngoklomelo ohamba nelaptop ngokuphuma phambili esiSothweni. “Sihlale sikhathazekile ngokuthi isiSotho sithathwa kalula kangangokuthi ngisho izikole zethu kazanele. Kuyenzeka uma ufuna izikole zethu kuphoqeke ukuba abazali bakuyise eFree State noma eGauteng njengoba iNquthu inezikole zamabanga aphezulu ezimbili kuphela,” kusho yena. Udaba lwabeSotho baseNquthu selungenelwe ngisho yibhodi yezilimi, iPansalb, efuna zonke izikhungo zikahulumeni zidlulise ulwazi emphakathini ngesiSotho, kungagcini ngokuba yisiNgisi ngesiZulu.
Abanye abafundi bahlonishwe ngokwenza kahle ezingeni lesifunda ezifundweni okubalwa kuzo iMaths. Yize bekubhoke iCovid-19, kodwa othisha bezikole zaseNquthu bathi izingane bezizimisele ngoba bezivele zizihlanganele esikoleni ziqhubeke zifunde. Umasipala uklomelise abafundi abawu-10 bendawo abaphase ngamalengiso umatikuletsheni ngezitifiketi ezihambisana nama laptop. UMnu Shabalala umemezele ukuthi abeSotho sebezokwazi ukuthola usizo ngolimi lwabo njengoba phambilini bebeluthola ngesiZulu. “Lolu hlelo sesilusebenze kakhulu njengomasipala ngokubambisana nezithunywa zesizwe sakwaMolefe.
“Okunye nje esizokwenza wukuthi imiqulu yethu echaza ngezinhlelo zentuthuko isizobhalwa nangesiSotho njengoba ekuqaleni ibibhalwe ngesiZulu nangesiNgisi kuphela. “Sikwenza lokho ukukhombisa ukuthi njengomasipala sinakekela zonke izizwe ngokulingana,” kusho uMnu Shabalala. Uthi izikole zaseNquthu zisebenze ngokukhulu ukuzikhandla njengoba ophume phambili kuMasipala wesiFunda uMzinyathi, owesibili nowesine bephume ezikoleni zakule ndawo. “Imfundo siyayeseka kakhulu ngoba yiyona eyokhulula abantu ekuhluphekeni,” kusho uMnu Shabalala ephetha ngokuthi bebevula inkulisa eSandlwana ku-Ward 12 namhlanje ngoLwesithathu. Le nkulisa idle u-R2 miliion.
“Lokhu kuchaza ukuthi imfundo siyeseka kuwona wonke amazinga,” kusho uMnu Shabalala.
Previous articleKutholwe izidumbu zabashadikazi ziboshiwe endlini
Next articleAmadoda anesithembu athi kuhlale kuyiValentine kuwona